Umthetho wabucala - Forex Lens
Umnikezeli ngenkonzo akazukuqesha, athengise, afumane okanye nangayiphi na indlela asebenzisa ulwazi lwabathengi lomthengi. Olu lwazi luya kugcinwa luyimfihlo ngokungqongqo.
Siqokelela iidilesi ze-imeyile zabo banxibelelana nathi nge-imeyile, bahlanganise ulwazi malunga nokuba yeyiphi na abathengi abangena kuyo okanye bayandwendwela, indawo ekufutshane, idilesi ye-IP, kunye nolwazi oluzinikelwe ngumthengi (njengolwazi lokuphononongwa kunye / okanye ukubhaliswa kwesiza) .Lo lwazi Siyiqokelela isetyenziselwa ukuphucula umxholo wamaphepha eWebhu nomgangatho wenkonzo yethu.
Sifuna ulwazi olufana negama lakho, igama lenkampani, idilesi ye-imeyile, idilesi yokuhlawula kunye nolwazi lwekhadi letyala kubasebenzisi beenkonzo zethu. Sisebenzisa ulwazi oluqokelelweyo kwezi njongo zilandelayo: iimveliso kunye nokunikezelwa kweenkonzo, ukubiza amatyala, ukuchonga kunye nokuqinisekisa, ukuphucula iinkonzo, unxibelelwano kunye nophando
Icookie sisixa esincinci sedatha, esoloko sibandakanya isazisi esikhethekileyo esingaziwayo, esithunyelwa kwisikhangeli sakho kwiikhompyuter zewebhusayithi kwaye sigcinwe kwihard drive yekhompyuter yakho. Iicookies ziyafuneka ukuba zisebenzise inkonzo yethu. Sisebenzisa ikuki ukurekhoda ulwazi lwangoku lweseshoni, kodwa musa ukusebenzisa ikuki esisigxina.
Sisebenzisa abathengisi beqela lesithathu kunye namaqabane ekubambeni ukubonelela ngezinto eziyimfuneko, isoftware, uthungelwano, ukugcinwa kunye nobuchwephesha obunxulumene nokufunekayo ukuqhuba iinkonzo ezibonelelweyo. Nangona sinekhowudi, yolwazi kunye nawo onke amalungelo esicelo, uwagcina onke amalungelo kwiinkcukacha zakho.
Sinokuveza ulwazi oluchaziweyo phantsi kweemeko ezizodwa, njengokuthobela subpoenas okanye xa isenzo sakho sokwaphula imiMiselo yeNkonzo.
Singahlaziya lo mgaqo-nkqubo rhoqo kwaye siya kukwazisa malunga neenguqu ezibalulekileyo kwindlela esiphatha ngayo ulwazi lomntu ngokuthi sithumele isaziso kwidilesi ye-imeyile ephambili echaziweyo kwiakhawunti yakho okanye ngokubeka isaziso esiphambili kwindawo yethu. Oku kubandakanya ukuhanjiswa kwedatha kwimeko Forex Lens ifunyenwe okanye idityaniswe nenye inkampani.
Umgaqo-nkqubo wabucala uhlanganiselwe ukusebenzela ngcono abo bachaphazelekayo ngendlela yabo 'Ulwazi oluchongiweyo lomntu' olusetyenziswa kwi-Intanethi. I-PII, njengoko ichaziwe kumthetho wabucala wase-US kunye nokukhuseleka kolwazi, lulwazi olunokusetyenziselwa lodwa okanye nolunye ulwazi ukuchonga, ukunxibelelana, okanye ukufumana umntu omnye, okanye ukuchonga umntu ngokomxholo. Nceda ufunde umgaqo-nkqubo wethu wabucala ngononophelo ukuze ufumane ukuqonda okucacileyo kwendlela esiqokelela, sisebenzise, ​​sikhusele okanye ngenye indlela sisingatha ngayo uLwazi oluKhethekileyo oluhambelana nawe ngokwewebhusayithi yethu.
Xa usenza iodolo okanye ubhalisa kwindawo yethu, njengoko kufanelekile, unokucelwa ukuba ufake igama lakho, idilesi ye-imeyile, idilesi ye-imeyile, inombolo yefowuni, ulwazi ngekhadi letyala, inombolo yokhuseleko lwentengiso, iiNkundla zeSiko okanye ezinye iinkcukacha ukukunceda ngamava akho.
Siqokelela ulwazi kuwe xa ubhalisa kwindawo yethu, faka iodolo, ubhalisela incwadana, uphendule kuvavanyo, gcwalisa ifomu, Sebenzisa iNgxoxo ebukhoma, Vula iTikiti lokuxhasa okanye ufake ulwazi kwindawo yethu.
Sinike ingxelo malunga neemveliso zethu okanye iinkonzo zikhangele
• Ukuzikhethela amava akho kunye nokuvumela ukuba sihambise uhlobo lomxholo kunye neminikelo yemveliso apho unomdla kakhulu.
• Ukuphucula i-website yethu ukuze sikhonze kangcono.
• Ukusivumela ukuba sisebenze kangcono xa usabela kwizicelo zakho zeenkonzo zamakhasimende.
• Ukulawula ukhuphiswano, ukukhuthazwa, uphando okanye enye indawo yesayithi.
• Ukukhawuleza ukucwangcisa ukuthengiselana kwakho.
• Ukucela ukulinganisa nokuhlaziywa kweenkonzo okanye iimveliso
• Ukulandela kunye nabo emva kweenkcukacha (bukhoma ingxoxo, i-imeyili okanye imibuzo yefoni)
Ulwazi lwakho lomntu luqulethwe kumanethiwekhi akhuselekileyo kwaye lufikeleleke kuphela kwinani elincinci labantu abanamalungelo okufikelela okukhethekileyo kwiinkqubo ezinjalo, kwaye kufuneka ukuba igcine ulwazi oluyimfihlo. Ukongeza, zonke iinkcukacha ezibuhlungu / zekhredithi ozinikezelayo zifakwe ngekholeji ngeTeknoloji yeSecurity Socket Layer (SSL).
Siphumeza iindlela ezahlukeneyo zokukhusela xa umsebenzisi ebeka umyalelo, ungenise okanye ufinyelele ulwazi lwabo ukugcina ukhuseleko lweenkcukacha zakho.
Zonke iintengiso zenziwa ngumboneleli wesango kwaye azigcinwa okanye zicutshungulwe kumaseva ethu.
Ngaba siyazisebenzisa 'ii-cookies'?
Ewe. Iicookies ziifayile ezincinci ezithunyelwa kwindawo okanye kumnikezeli wayo weenkonzo kwi-hard drive yekhompyuter yakho kwisikhangeli sakho seWebhu (ukuba uyavuma) esenza ukuba iinkqubo zesayithi okanye zomboneleli weenkonzo ziqaphele isikhangeli sakho kwaye zibambe kwaye zikhumbule ulwazi oluthile. Umzekelo, sisebenzisa ikuki ukusinceda sikhumbule kwaye sisebenzise izinto kwinqwelo yakho yokuthenga. Zikwasetyenziselwa ukusinceda siqonde ukhetho lwakho ngokusekwe kwimisebenzi yendawo yangaphambili okanye yangoku, esenza ukuba sikunike iinkonzo eziphuculweyo. Sikwasebenzisa ikuki ukusinceda ukuba siqokelele idatha edityanisiweyo malunga nokugcwala kwesiza kunye nokunxibelelana kwesiza ukuze sikwazi ukubonelela ngamava angcono esiza kunye nezixhobo kwixesha elizayo.
• Siza kukhumbula kwaye uqhubekeke nezinto ezikwinqwelo yokuthenga.
• Qonda kwaye ugcine ukhetho lomsebenzisi kutyelelo lwexesha elizayo.
• Qokelela idatha edibanisa malunga nokugcwala kwesiza kunye nokuhlangana kwendawo ukuze unikezele ngamava angcono esiza kunye nezixhobo kwixesha elizayo. Sinokusebenzisa iinkonzo ezithembakeleyo zomntu wesithathu ezilandelela olu lwazi egameni lethu.
Unokukhetha ukuba ikhompyuter yakho ikulumkise ngalo lonke ixesha kuthunyelwa i-cookie, okanye ungakhetha ukucima zonke ii-cookies. Ukwenza oku ngokusebenzisa useto lwebrawuza yakho. Kuba isikhangeli sahlukile kancinci, jonga kwimenyu yoNcedo lwebrawuza yakho ukuze ufunde indlela echanekileyo yokuguqula ii-cookies zakho.
Ukuba abasebenzisi bakhubaza ikuki kwisikhangeli sabo:
Ukuba ucima iikuki kuzicima ezinye zeendawo.
Ukudalulwa kweqela lesithathu
Asithengisi, asithengisi, okanye kungenjalo sidlulisele amaqela angaphandle ulwazi lwakho oluchongiweyo ngaphandle kokuba sinike abasebenzisi isaziso kwangaphambili. Oku akubandakanyi amaqabane abamba iwebhusayithi kunye namanye amaqela asincedayo ekusebenzeni iwebhusayithi yethu, ukuqhuba ishishini lethu, okanye ukukhonza abasebenzisi bethu, ukuba nje la maqela avuma ukugcina olu lwazi luyimfihlo. Sinokukhupha ulwazi xa ukukhutshwa kufanelekile ukuthobela umthetho, ukunyanzelisa imigaqo-nkqubo yethu yesiza, okanye ukukhusela amalungelo ethu okanye abanye, ipropathi okanye ukhuseleko.
Nangona kunjalo, ingcaciso engabonakali yintwendwe ingabonelelwa kwamanye amaqela ukuthengisa, ukuthengisa okanye ezinye izinto ezisetyenziswayo.
Ngamaxesha athile, ngokokubona kwethu, sinokubandakanya okanye sinike iimveliso zangaphandle okanye iinkonzo kwiwebhusayithi yethu. Ezi ndawo zomntu wesithathu zineemigaqo-nkqubo yabucala eyahlukileyo neyimfihlo. Asinayo uxanduva okanye uxanduva kumxholo kunye nemisebenzi yezi ndawo zinxibelelene. Nangona kunjalo, sifuna ukukhusela ukuthembeka kwendawo yethu kwaye samkele nayiphi na ingxelo malunga nale ndawo.
Iimfuno zentengiso zikaGoogle zinokushwankathelwa yimigaqo yokuthengisa kaGoogle. Zibekwe endaweni ukubonelela ngamava amahle kubasebenzisi. https://support.google.com/adwordspolicy/answer/1316548?hl=en
UGoogle, njengomthengisi weqela lesithathu, usebenzisa ikuki ukuhambisa iintengiso kwindawo yethu. Ukusetyenziswa kweGoogle kwicookie ye-DART kuyenza ukuba ikwazi ukuhambisa iintengiso kubasebenzisi bethu ngokusekwe kutyelelo lwangaphambili kwindawo yethu nakwezinye iisayithi ezikwi-Intanethi. Abasebenzisi banokukhetha ukuphuma kwicookie ye-DART ngokundwendwela umgaqo-nkqubo wabucala weNtengiso yeGoogle kunye noMxholo weNethiwekhi.
• Ukumaketha nge-Google AdSense
• Ukubikwa kweNgcaciso yeNethiwekhi yeGoogle
• Amanani kunye neNzala yokuBika
• Integrated Platform Integration
Thina, kunye nabathengisi benkampani yesithathu ezifana ne-Google basebenzisa ii-cookies zokuqala (njenge-cookieskie ye-Google Analytics) kunye ne-cookie-party cookie (okanye i-cookie ye-DoubleClick) kunye nabanye abakhonkco benkampani yesithathu ndawonye ukuqokelela idatha malunga nokusebenzisana komsebenzisi kunye iimpawu zokubhengezwa kunye neminye imisebenzi yenkonzo yesibhengezo njengoko zihambelana newebsite yethu.
Abasebenzisi bangakwazi ukusetha ukhetho malunga nendlela i-Google ikukhangisa ngayo usebenzisa i-Google Ad Izicwangciso zeZilungiselelo. Ngenye indlela, unako ukuphuma ngokutyelela ikhasi le-Outlet Advertising Initiative Opt Out okanye usebenzisa i-Google Analytics Opt Out Out browser.
ICalOPPA ngumthetho wokuqala kurhulumente kwisizwe ukufuna iwebhusayithi zorhwebo kunye neenkonzo ze-Intanethi ukuthumela umgaqo-nkqubo wabucala. Ukufikelela komthetho kolule ngaphaya kweCalifornia kufuna ukuba nawuphina umntu okanye inkampani e-United States (kwaye mhlawumbi kube lihlabathi) elisebenza kwiiwebhusayithi eziqokelela ulwazi oluchongiweyo oluvela kubathengi baseCalifornia ukuthumela umgaqo-nkqubo wabucala ocacileyo kwiwebhusayithi yayo echaza ngqo ulwazi oluqokelelweyo kunye nezo abantu okanye iinkampani ekwabelwana ngazo. -Bona ngakumbi kwi: http://consumercal.org/california-online-privacy-protection-act-caloppa/#sthash.0FdRbT51.dpuf
Ngokwe-CalOPPA, siyavumelana noku kulandelayo:
Abasebenzisi banokutyelela indawo yethu ngokungaziwa.
Xa lo mgaqo-mfihlo ususelwe, siza kudibanisa ikhonkco kwiphepha lethu lasekhaya okanye ubuncinci, kwikhasi lokuqala elibalulekileyo emva kokungena kwiwebhusayithi yethu.
Ikhonkco lethu loMgaqo-nkqubo wabucala libandakanya igama elithi 'Ubumfihlo' kwaye linokufumaneka ngokulula kwiphepha elichazwe apha ngasentla.
Uya kwaziswa nayiphi na utshintsho lomgaqo-nkqubo:
• KuMgaqo-nkqubo WeMfihlo
Unokutshintsha ulwazi lwakho lomntu:
• Ngokungena kwiakhawunti yakho
Isayithi lethu lokusingatha Musa ukulandelela iimpawu?
Siyabahlonela Musa ukulandelela iimpawu kwaye Musa ukulandelela, hlwayela ii-cookies, okanye sebenzisa ukukhangisa xa ungekho ukulandelela (DNT) umkhangeli wesiphequluli okhoyo.
Ngaba isayithi yethu ivumela ukulandelela ukuziphatha komntu wesithathu?
Kukwabalulekile ukuba uqaphele ukuba sivumela ukulandelelwa kokuziphatha komntu wesithathu
Xa kufikwa kwingqokelela yolwazi lobuqu oluvela kubantwana abangaphantsi kweminyaka eli-13 ubudala, uMthetho waBantwana woKhuseleko lwaBucala kwi-Intanethi (COPPA) ubeka abazali kulawulo. I-Federal Trade Commission, i-arhente yokhuseleko lwabathengi e-United States, inyanzelisa umthetho we-COPPA, ochaza ukuba zeziphi izinto ezinokwenziwa ngabasebenza kwiiwebhusayithi kunye neenkonzo ezikwi-Intanethi ukukhusela ubumfihlo babantwana kunye nokhuseleko kwi-Intanethi.
Sithengisa ngokukodwa abantwana abangaphantsi kweminyaka yobudala be-13.
Siza kukuxelela nge-imeyili
• Ngosuku lwe-1 shishini
Siza kwazisa abasebenzisi ngezaziso zesayithi
Sivumelana noMgaqo-nkqubo wokuPhucula owodwa ofuna ukuba abantu banelungelo lokuphinda balandele ngokusemthethweni amalungelo abaxhasiweyo kubaqokeleli beenkcukacha kunye nabaproseshi abangakwazi ukuthobela umthetho. Lo mgaqo awufunekanga kuphela ukuba abantu banamalungelo okunyanzeliswa kubasebenzisi beenkcukacha, kodwa nokuba abantu baye bafumana inkundla okanye i-arhente karhulumente ukuphanda kunye / okanye ukutshutshisa ukungathobeli ngabaprocesari beenkcukacha.
• Thumela ulwazi, phendula kwimibandela, kunye / okanye ezinye izicelo okanye imibuzo
• Inkqubo yolawulo kunye nokuthumela ulwazi kunye nokuhlaziywa ngokuphathelele kumyalelo.
• Ukuthumela ulwazi olongezelelweyo olunxulumene nemveliso yakho kunye / okanye inkonzo
• Intengiso kwiluhlu lwethu lokuposa okanye uqhubeke nokuthumela ii-imeyile kubaxhasi bethu emva kokuthengwa kwangaphambili.
Ukuhambelana ne-CANSPAM, siyavuma oku kulandelayo:
• Ungasebenzisi izikhokelo zobuxoki okanye ezilahlekisa okanye iidilesi ze-imeyile.
• Ukuchonga umyalezo njengesikhangiso ngendlela efanelekileyo.
• Faka idilesi engokwenyama yoshishino lethu okanye kwikomkhulu le-site.
• Ukubeka iliso iinkonzo zokuthengisa i-imeyile ye-email ukuthotyelwa, ukuba enye isetyenziswa.
• Hlonipha ukuphuma / ungabhalisi izicelo ngokukhawuleza.
• Vumela abasebenzisi ukuba bangabhalisi ngokusebenzisa ikhonkco phantsi kwe-imeyile nganye.
• Landela imiyalelo phantsi kwe-imeyile nganye.
kwaye siya kususa ngokukhawuleza BONKE lelana.
Ukuba kukho nayiphi na imibuzo malunga nale nkqubo yobumfihlo, ungaqhagamshelana nathi usebenzisa ulwazi olungezantsi.
Ulungiswe ngokugqibela kwi-2018-05-23